> Resource > iPad > iPad hawada File Transfer: Transfer Faylal ay si / ka kaaftoomi doono hawada si xor ah iPad
Ayaa hawada iPad, ka ab shanaad iPad ayaa la sii daayay. Tani waxay hawada cajiib ah iPad waa u khafiif badan abid, laakiin ordi dhaqso, oo waxaad bixisaa xal sare, taas oo ku siinayaa waayo aragnimo cusub. Haddii aad iibsaday hawada iPad ah, waxaa laga yaabaa in aadan sugi karin si ay u gudbiyaan music, sawiro, videos iyo files dheeraad ah in, markii aad la cayaari karo. Si aad u samayn Transfer file hawada iPad, Lugood iyo iCloud gargaarana wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, Lugood sida caadiga ah aad xanuunka kala iibsiga file gaabis iyo khasaaro xogta. Sida iCloud, aad leedahay si aad u hubiso in aad haysato shabakadda WiFi in ay hubiyaan in gurmad iyo soo celinta nidaamka ah. Sidaas oo kale, xasilooni darro ee network Wi-Fi keeni karaan fashilka lagu ogaan karo iDevice iyo file kala iibsiga.
Sidaas darteed, haddii aad u xanuunsataan ku filan ka Lugood iyo iCloud oo aad rabto inaad isku daydid wax cusub, waxaad u tagi kartaa in ay TunesGo Wondershare . Waxaa kale oo ka wanaagsan Lugood, sameyn kara waxa Lugood dhaco gaaban. Sidaa daraadeed, si aad u hawada iPad wareejin karaan music, sawiro, xiriirada iyo videos la hayo tayada file hadda hawada iPad. Waxa aad siisaa awood ay uga dhoofin videos iyo music in Lugood iyo files ka badan, oo ay ku jiraan sawirrada, iMessages iyo xiriirada in computer. Intaa waxaa dheer, waxa ay maamushaa oo aan xiriir network, iyo interface user-dareen ka dhigaysa laftiisa ay fududahay in la xamili.
Diyaarinta: Riix badhanka Download si ay u soo bixi version maxkamad free of software sida ay nidaam adiga kuu gaar ah, ama Windows Mac. The version Mac la magacaabay ee TunesGo Wondershare (Mac) , caawiyay aad ku wareejin music, videos iyo sawiro ama ka soo hawada iPad si fudud. Halkan waxaan version Windows ka qaadan sida tusaale si uu idiin tuso habka iPad kala iibsiga hawada.
Tallaabada 1. Isku aad hawada iPad in kombiyuutarka
Ka qaada USB ah cable Apple oo loo isticmaalo si ay u xidhi aad hawada iPad in kombiyuutarka. Orod software ah. Your fur-hawada iPad dhowaan la ogaan doonaa. Markaasay aad arki doonaa in ay info faahfaahsan ku cad suuqa kala hoose, iyo dhammaan faylasha ku jira aad hawada iPad tusi doonaa in qaybaha galeeysid tagay.
Tallaabada kala iibsiga 2. File hawo iPad
1.Transfer music iyo videos iyo hawada iPad
Si aad u wareejin muusig iyo cajallado fiidyow, waxaad isku dayi kartaa tuuryo ah. On line hoose ee suuqa kala aasaasiga ah, waxaad ka arki kartaa Copy iDevice in Lugood , dhoofinta Music inay Lugood , Beddelaan Music iyo Beddelaan video MP3 . Iyaga Guji si aad u dajiyaan ama music dhoofinta.
Ka sokow tuuryo ah, waxaad samayn kartaa iibsiga music ee suuqa music ah. In galeeysid bidix, guji Media . On line ugu sareeya waa qaybaha warbaahinta, Music , Movies , Podcasts , bandhigyada TV , Music videos , Lugood U iyo buugaag . Guji mid ka mid ah qaybaha warbaahinta si ay u soo galaan suuqa kala maamulka ay. Markaas, waxaad ku dari kartaa, dhoofinta ama tirtirto music iyo videos.
2. iPad playlist hawada kala iibsiga
Dhammaan playlists smart iyo playlists caadi on your iPad hawada ku qoran yihiin. Markaas, waxaad riixi kartaa dar inay dajiyaan playlists ka Lugood iyo computer, ama guji dhoofinta in si ay u dhoofiyaan si Lugood iyo computer.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma ha uusan aad u dhoofiyaan playlists, laakiin waxa aad u dhoofin karaan heeso iyaga in.
3. Jiid iyo hoos u photos hawada iPad
By gujinaya Photos , waxaad ka arki kartaa Library Photo ah, Roll ah Camera oo albums (abuuray adigoo gujinaya dar ). In daaqadan, aad dhoofin karo fayl, albums oo la abuuro albums cusub. Fur gal ah, sida sawir Library, waxaad bilaabi kartaa inaad sawiro wareejiyo iyo kombiyuutarka.
4. nidaameed xiriir la Outlook, ku dar xiriir cusub iyo ku milmaan tus
Riix Xiriirada galeeysid bidix, iyo dhammaan dadka ay khuseyso ayaa la soo bandhigi doonaa guddi saxda ah. Riix Import / Dhoofinta inay dajiyaan file VCF ama xiriir la Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail, ama gurmad xiriir iyaga.
Marka tus aad u tiro badan ka soo muuqan aad hawada iPad, waxaad iyaga ku milmaan karaa koox bir ah, lambarka taleefanka iyo magacaaga.
5. iMessages kaabta hawada iPad
Ma doonaysaa in aad gurmad iMessages soo xulay hawada iPad in computer. Just guji SMS si ay u muujiyaan maamulka fariinta. Hubi iMessages sida aad doonayso inaad guji dhoofinta. In liiska hoos-hoos u, doortaan nooca ah ka badbaadiyay XML, TXT iyo HTML.
Fiiro gaar ah: SMS and MMS ayaa sidoo kale loo ogol yahay in la xoojiyaa.